Fivarotana ranom-boankazo Juice amidy any Dubai - BusinessFinder.Me
Fivarotana Juice bizina mihodina amidy any Dubai
Juicebar mihazakazaka amidy ao Souk Al Madinat Jumeirah, miaraka amin'ny fahazoan-dàlana kafe, akaikin'ny Star Bucks. Juicebar miasa tanteraka miaraka amin'ny zava-pisotro mahaliana sy zava-pisotro mahasalama. Ny entana fanampiny toy ny gilasy, sandwich ary salady dia azo ampiana ho an'ny benefi ...
Price : 290,000.00AED
Date : Septambra 17, 2021
Location : Dubai Marina, Dubai, UAE
Juicebar mihazakazaka amidy ao Souk Al Madinat Jumeirah, miaraka amin'ny fahazoan-dàlana kafe, akaikin'ny Star Bucks.
Juicebar miasa tanteraka miaraka amin'ny zava-pisotro mahaliana sy zava-pisotro mahasalama.
Ny entana fanampiny toy ny gilasy, ny sandwich ary ny salady dia azo ampiana ho tombontsoa bebe kokoa.
Any amin'ny toerana mafana fizahan-tany sy fizahan-tany no misy azy.
Anisan'izany ny serivisy Deliveroo.
Tombana azo ifampiraharahana.
Raha mila fanazavana fanampiny dia mifandraisa Pradeep ao amin'ny
Mpividy matotra ihany.
Orinasa tsara indrindra # 50 amidy
Orinasa #donut amidy
Varotra orinasa mpivarotra # raharaham-barotra
Orinasa #excavation amidy
Orinasa fivarotana sakafo # amidy
#franchises amidy amin'ny tompony
Toeram-panompoana #fandraisana manokana amidy
Orinasa fivarotana lehibe amidy
#hairdressing salon amidy
Orinasa fahasalamana # trano amidy
# Ahoana ny fomba hivarotana ny orinasanao
# Ahoana no hivarotana ny fananana amin'ny fanombohana
# Ahoana no hivarotana amin'ny entana lafo be
# Ahoana ny fomba hivarotana ny fizarana amin'ny orinasa tsy miankina
# ahoana no hivarotana amin'ny governemanta
# Ahoana ny fomba hivarotana ny hevitry ny orinasanao
# Ahoana no fomba hivarotana ny hevitrao amin'ny orinasa iray
# Ahoana no hivarotana ny fanombohana anao
#Joice bar amidy
#Joice bar amidy any uae
Orinasa #landscape amidy
#moving orinasa amidy
Orinasa vaovao # amidy
Varotra #online amidy shopify
Orinasa #popcorn amidy
Orinasa # printy amidy
#private label amazon fba
# orinasa an-tserasera azo amidy amidy
Orinasa misotro ronono amidy
#sale ny raharaham-barotra ho ahiahy mandeha
#selling orinasa voafetra
#sasa fanompoana amidy
Orinasa #sunbelt amidy
Orinasa #sushi amidy
fivarotana #tea amidy
Tranonkala fivarotana #textbook
Orinasa #tidy amidy
#fanao fanao amidy
#vozaha mihazakazaka amidy any dubai
Amidy #Well Running Juice azo amidy any Dubai
#wells fargo dia mivarotra fisotroan-dronono
Orinasa #yoga amidy
Ivon-toerana Arts & Music amidy any Dubai
Salon amidy ambany vidiny amidy any Dubai
Salon Vehivavy Premium lehibe amidy any afovoan-tanànan'i Dubai
Orinasa fivarotana fivarotana tsara amidy any Dubai
Gresy Cluster, International City, Dubai, UAE
Trano fisakafoanana tsara tarehy amidy any Dubai
Al Qusais 1, faritra onenana Al Qusais, Al Qusais, Dubai, UAE
Toeram-pisakafoanana mihazakazaka mavitrika amidy any UAE